မွငျ့မွတျ မွှောကျပေး လို့ အမိုကျစားတကျတူးထိုးဖွဈသှားတဲ့ ယုနျလေး – Askstyle
မွငျ့မွတျ မွှောကျပေး လို့ အမိုကျစားတကျတူးထိုးဖွဈသှားတဲ့ ယုနျလေး
အဆိုတော် ယုန်လေး ဘဝကနေ ဒါရိုက်တာ ၊ သရုပ်ဆောင် ယုန်ကြီးဘဝထိ တက်လှမ်းလာနိုင်သူက ကျော်ဘုန်းအောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာက ခယပြီး သရုပ်ဆောင်ခိုင်းနေရတဲ့ လူတွေထက် အကြမ်းပတမ်း အားလုံးရပြီး စိတ်တူကိုယ်တူ ဖြစ်မယ့် အနုပညာရှင်တွေကိုပဲ ယုန်လေးက အရာသွင်းတာပါ။ မြင့်မြတ် ၊ မိုးယံဇွန် ၊ ထူးခြား ၊ ခင်လှိုင် ၊ ညီနန္ဒ ၊ ထူးအောင်စတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ပဲ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖန်တီးလေ့ရှိသလို လူငယ်တွေရဲ့ အကြိုက်ကို ရုံတင်ပိတ်ကားကြီးကနေ ချပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယုန်လေးရဲ့ original gansters3ရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုတော့ အပြီးအစီး ရိုက်ကူးပြီးကာမှ ရုံတင်ခွင့်ပိတ်ခံရတဲ့အတွက် မျှော်လင့်ထားခဲ့ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ လက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။ အမိုက်စားရိုက်ချက်တွေနဲ့ အပြင်းစား သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တောင့်တလွန်းတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ယုန်လေးက “သတိ အန္တာရယ်ရှိသည်” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ရုံတင်ပေးခဲ့သလို Underground ကိုလည်း ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုံမတင်လိုက်ရတဲ့ Orignial Gansters ကို တက်တူးထိုးဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ ယုန်လေးက ခုလို ရေးသားထားပါတယ်။“Tattoo မကြိုက်တဲ့ လူကို မြင့်မြတ် မြှောက်ပေးတာ ဒီလိုလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမယ့် ထိုးသင့်တဲ့ အမှတ်အသားလေး ORIGINAL GANGSTER ထိုးထားတဲ့အတွက်ကျေနပ်ပါတယ် . . ကျွန်တော်တို့ တန်ဖိုးထားလို့ ကိုယ်ပေါ်သေယာပါတင်ထားတဲ့
ORIGINAL GANGSTER ကိုလည်း အနုပညာအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့် ရချင်ခဲ့တာ
ဆင်ဆာရရ မရရ ကျွန်တော်တို့ကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ OG ကို မမေ့ရင် ကျေနပ်ပါပြီ .
OG နာမည် Tattoo ထိုးထားတဲ့ လူတွေ အကုန်လုံး ပျော်စရာပွဲလေးလည်း စီစဉ်ပါဦးမယ် .
အားလုံး Peace ” ဆိုပြီး တက်တူးကို ကျောအပြည့်ထိုးထားတဲ့ ပုံရိပ်ကို ချပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ယုန်လေးရဲ့ Orignal Gansters လည်း နောက်ဆက်တွဲ အများကြီး ဖန်တီးနိုင်ပြီး ပရိသတ်တွေ ကြိုက်မယ့် စွမ်းရည်တွေ ထုတ်ပြနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အဆိုတျော ယုနျလေး ဘဝကနေ ဒါရိုကျတာ ၊ သရုပျဆောငျ ယုနျကွီးဘဝထိ တကျလှမျးလာနိုငျသူက ကြျောဘုနျးအောငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါရိုကျတာက ခယပွီး သရုပျဆောငျခိုငျးနရေတဲ့ လူတှထေကျ အကွမျးပတမျး အားလုံးရပွီး စိတျတူကိုယျတူ ဖွဈမယျ့ အနုပညာရှငျတှကေိုပဲ ယုနျလေးက အရာသှငျးတာပါ။ မွငျ့မွတျ ၊ မိုးယံဇှနျ ၊ ထူးခွား ၊ ခငျလှိုငျ ၊ ညီနန်ဒ ၊ ထူးအောငျစတဲ့ သရုပျဆောငျတှနေဲ့ပဲ ဇာတျလမျးတှေ ဖနျတီးလရှေိ့သလို လူငယျတှရေဲ့ အကွိုကျကို ရုံတငျပိတျကားကွီးကနေ ခပြွနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ယုနျလေးရဲ့ original gansters3ရုပျရှငျကားကွီးကိုတော့ အပွီးအစီး ရိုကျကူးပွီးကာမှ ရုံတငျခှငျ့ပိတျခံရတဲ့အတှကျ မြှျောလငျ့ထားခဲ့ရတဲ့ ပရိသတျတှေ လကျလြှော့လိုကျရပါတယျ။ အမိုကျစားရိုကျခကျြတှနေဲ့ အပွငျးစား သရုပျဆောငျခကျြတှကေို တောငျ့တလှနျးတဲ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ ယုနျလေးက “သတိ အန်တာရယျရှိသညျ” ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျကားကွီးကို ရုံတငျပေးခဲ့သလို Underground ကိုလညျး ရိုကျကူးထုတျလုပျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
ရုံမတငျလိုကျရတဲ့ Orignial Gansters ကို တကျတူးထိုးဖွဈကွောငျးကိုတော့ ယုနျလေးက ခုလို ရေးသားထားပါတယျ။“Tattoo မကွိုကျတဲ့ လူကို မွငျ့မွတျ မွှောကျပေးတာ ဒီလိုလေးတော့ဖွဈသှားတယျ။ဒါပမေယျ့ ထိုးသငျ့တဲ့ အမှတျအသားလေး ORIGINAL GANGSTER ထိုးထားတဲ့အတှကျကနြေပျပါတယျ . . ကြှနျတျောတို့ တနျဖိုးထားလို့ ကိုယျပျေါသယောပါတငျထားတဲ့
ORIGINAL GANGSTER ကိုလညျး အနုပညာအဖွဈ ဆကျလကျရပျတညျခှငျ့ ရခငျြခဲ့တာ
ဆငျဆာရရ မရရ ကြှနျတျောတို့ကို ခဈြတဲ့ ပရိတျသတျတှေ OG ကို မမရေ့ငျ ကနြေပျပါပွီ .
OG နာမညျ Tattoo ထိုးထားတဲ့ လူတှေ အကုနျလုံး ပြျောစရာပှဲလေးလညျး စီစဉျပါဦးမယျ .
အားလုံး Peace ” ဆိုပွီး တကျတူးကို ကြောအပွညျ့ထိုးထားတဲ့ ပုံရိပျကို ခပြွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။သရုပျဆောငျယုနျလေးရဲ့ Orignal Gansters လညျး နောကျဆကျတှဲ အမြားကွီး ဖနျတီးနိုငျပွီး ပရိသတျတှေ ကွိုကျမယျ့ စှမျးရညျတှေ ထုတျပွနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။